प्रजातन्त्रको खोल ओड्नेले देश र जनतालाई किन निर्चोदै छन ? | Samajik Khabar
Home अन्य प्रजातन्त्रको खोल ओड्नेले देश र जनतालाई किन निर्चोदै छन ?
म यो प्रजातन्त्र किन मानु देशभक्तिको सुघंधित आकर्षण छैन भने ।
म यो व्यवस्था किन मानु मेरी मातृभूमि नेपालप्रतिको प्रेम छैन भने ।।
सफल प्रजातन्त्र भएका देशहरु जसमा अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, नोर्बे, अस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जापान इत्त्यादी जो एकअर्का देशका सहयोगी देश हुन् । अर्को तिर असफल प्रजातन्त्र भएका देशहरु जसमा इराक, सिरिया, लिबिया, सुडान जसले माथिका धनि देशहरुको स्वार्थका लागि सहयोगी बनेनन् । यसको अर्थ के हो प्रजातन्त्रको राजनीतिक प्रक्रिया तपाई हाम्रा आधारभूत आवश्यकता र बिकाशका लागि होइन यो त एउटा सिंगो देशलाई राजनीतिक रुपले आफ्ना स्वार्थका लागि त्यस देशको प्राकृतिक सम्पदामा कब्जा गर्ने, आफु र आफ्नो देशको उन्नति अनुकुल हुने गरि राजनीतिक प्रक्रिया ब्यबस्थापन गर्ने नम्बर गेम र बिदेशीहरुले बनाएको आधारशिला हो । जसमा बिदेशीहरुलाई खेल्न सक्ने सामाजिक रुपले प्रयाप्त ठाउं राखिदिने माद्यम मात्र हो ।
मलाई माफ गर्नु होला मेरो देशको अनुभवले मलाई यही सिकायो ।
देशको उच्च नेत्रित्तोमा जोसुकैहोस् धनि देशमा यस प्रजातन्त्रले अमेरिकी, युरोपि, जापानी जनताहरुलाई धनि, सुखी, खुशी बनायो तर हाम्रो देशमा शेर बहादुर देउबा लगाएत केहि कांग्रेस पार्टीका नेताहरुलाई मात्र, राजेन्द्र महत्तो लगाएत मदेश पार्टीका केहि नेताहरुलाई मात्र, प्रचण्ड, केपी ओली लगाएत नेकपा पार्टीका केहि नेताहरुलाई मात्र धनि, सुखी, खुशी बनायो, ‘‘ नेताहरुको दिन दुगिनी रात चौगनी उन्नति गरायो ‘‘।
यो कस्तो प्रजातन्त्र हो नेपाल देश र नेपाली जनतालाई कंगाल बनाउने ।
शेर बहादुर, प्रचन्ड, केपी, बाबुराम, राजेन्द्र महत्तो जस्तालाई मालामाल बनाउने ।।
यो कस्तो प्रजातन्त्र हो नेपाली चेली बेटीहरुलाई होटेलमा पुर्याउने ।
आरजु, हिसिला जस्तीलाई संसदमा पुर्याउने ।।
यो कस्तो प्रजातन्त्र हो सक्षम जनशक्तिलाई खाडी मुलुक पठाउने ।
देशका प्राकृतिक सम्पदाहरु कोशी, महाकाली दिल्लीलाई बुझाउने ।।
यो कस्तो प्रजातन्त्र हो देशको उर्बर खेति योग्य जमिन बाँझो राख्न लगाउने ।
बेदेशीका रासायनिक खाद्यसामग्रीहरु कमिसनका लागि आयात गर्न लगाउने ।।
यो कस्तो प्रजातन्त्र हो अधिकारका नाममा देशभित्र जनयुद्धबाट जनता मराउने ।
राजनीतिक उन्नतिका नाममा १२ र २५ बुंदे बिदेशीका हितका लागि बिदेशीमा गराउने ।।
यो कस्तो प्रजातन्त्र हो…..।।,
हे मेरा देशका धुर्तपाखण्डी नेताहरु हो ‘‘।। भन ‘।। यो कस्तो प्रजातन्त्र हो ‘‘‘।
संख्या पुर्याए पछि हाम्रो रास्ट्रिय स्वाभिमान, धर्म, संस्कृति, सद्भाव बेच्न सकिने ‘‘‘।
हे विर नेपाली हो १ प्रजातन्त्र तपाई, हामीले भोगेको जस्तो हो भने !
प्रजातन्त्र एउटा गौरवमय संस्थाको गरिमा भत्काउने दलालतंत्र हो । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण हेर्नुहोस त । प्रहरी महानिरीक्षक हुनसक्ने गरि पुगेका सबै अफिसरहरु योग्य नै हुन्छन नि । बरियताको क्रमनुसार पदोउन्नति गरेर संस्था लाई मर्यादित तथा संगठित बनाउने हो नि ।
जुन संस्थामा संस्कारको लागि युनिटी छैन वा गरिदैन म मेरा छोरा,छोरी लाई प्रहरी बन्न कहिले प्रोत्साहन दिने छैन र सबै नेपालीहरुले पनि ठिक यही सोचेका होलान । पुर्व राजाले शेर बहादुर देउबा ज्यु लाई असक्षम भनेको पत्रिकामा पढेको थिए । कांग्रेसको नेत्रित्तो लिसकेपश्चात सक्षम त हामीले कुनै कोणबाट देखेनौ । बिदेशीबाट आफु प्रयोग हुने अनि संगै अरुलाई पनि प्रयोग गर्ने बाहेक सक्षमको ब्यबहार र कार्य शैली कहिँ कतैबाट देखिदैन । अब त झन् आरजु देउबाको माइती दिल्ली सरेको छ । पुर्व राजाले ठिकै भने जस्तो पो लाग्न थाल्यो । प्रजातन्त्र झोलामा पैसा बोकेर भ्रस्टाचार गर्न पाऊ भनि पद माग्नेलाई प्रमाणपत्र दिने दलालतंत्र हो । प्रजातन्त्र एउटा व्यक्ति, समाज, देशको नैतिकता, संस्कृति, सद्भाव पतन गर्ने दलालतंत्र हो ।
यो कस्तो प्रजातन्त्र हो अमेरिकी, युरोपि, आदि जनताहरुलाई फाप्ने नेपाली जनताहरुलाई नफाप्ने ।
प्रजातन्त्र दलालका लागि महालक्ष्मी, माहाशक्ति हो तर आम गरिब नेपालीहरुका लागि क्यान्सर हो, यो हाम्रो बालीनालीमा लाग्ने रोग जस्तै हो, जमिनको उर्बर शक्ति घटाउने रसाएन मल जस्तै हो, सुन्दरफलमा लागेको किरा जस्तै हो र यसको निवारण जति सक्दो छिटो गर्ने । सकिन्छ यसका नीतिगत अन्तरवस्तु नेपाल र नेपाली नागरिकको हित हुने गरि सच्याउने वा परिवर्तन गर्ने सकिदैन यसका जडा सहित उखलेर फालिदिने । हजार रुपैयाको मासुभातमा हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न आन्दोलनको सहयोगी बनेऊँ, आफ्नो भोट दिएर प्रजातान्त्रिक पद्दतिको सहयोगी बनेऊँ, बदलामा के उन्नति भयो ? बिगतमा १७ हजार निर्दोषहरुको हत्या भयो र भविस्यमा १७ लाख निर्दोषहरुको हत्या हुनसक्छ । त्यसमा म, मेरा छोरा, छोरीहरु, मेरो परिवारहरु वा मेरा आफन्तहरु पर्न सक्दैनन् भन्ने ठोकुवा गर्न सकिदैन ? त्यसैले समग्र देश (मधेशी, पहाडी र हिमाली सबै) एकढिक्का भएर सजकताका साथ उपस्थिति जनाउँ दलालहरुको पतनका लागि । इनिहरुको कुकृत राजनीतिकको बलि दिनको लागि ।
प्रजातन्त्र,लोकतन्त्र, गणतन्त्रको ब्यबस्थापकीय जग एउटै हो । यसको अन्तरवस्तु नेपाली जनताको लागि अनुकुल बनाउनु पर्छ । संख्या पुर्याए पछि जे पनि गर्न मिल्ने हुनु हुँदैन । देशको नाम, झन्डा, धर्म, भाषा र सुरक्षा निकाय छुन नमिल्ने गरि ब्यबस्थापन गर्नुपर्छ। अरु देशको व्यवस्था नक्कल गर्ने होइन देशको सामाजिक, संस्कृतिक र आर्थिक जग बलियो हुने गरि व्यवस्था सिर्जना गर्ने हो । सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाली भूभाग भारतबाट फिर्ता लिनै पर्छ । भारतले नेपालको अन्तरिक नीतिमा सुक्ष्म ब्यबस्थापन गर्नुको मूल कारणहरु मध्य एक गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता गर्नु नपरोस भन्ने पनि हो ।
– छत्र शाही, एक आम नेपाली
Previous articleअब सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैन, आफै बस्नुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल
Next articleमन्त्री बिना मगरले २५ करोड कमिसनको बार्गेनिङ गरेको हल्ला कि वास्तविकता ?